गुल्मीमा बन्दै गरेको पक्कि पुल भत्कियो, ५ घाइते अध्ययन गर्न विज्ञ टोलि जादै - Butwal Online
गुल्मीमा बन्दै गरेको पक्कि पुल भत्कियो, ५ घाइते अध्ययन गर्न विज्ञ टोलि जादै
गुल्मी, २ वैशाख / गुल्मीमा बन्दै गरेको पक्कि पुल भत्किएको छ । मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ७ जोड्ने बढिगाढ खोलामा बन्दै गरेको पुल आइतबार साझँ भत्किएको हो ।
पुल भत्किदा निर्माण व्यवसायीसहित पाचँजना घाइते भएका छन् । पुलले च्यापेर निर्माण व्यवसायी ऋषिराम इटानी गम्भिर घाइते भएका छन् । भने मुसिकोट नगरपालिका ३ का २३ बर्षका राम बहादुर कुमाल, ३३ बर्षका गणेश कुमाल, वडा नं ४ का ५१ बर्षका रुद्र बहादुर कार्की र बाग्लुङ्गको बडिगाढ गाउँपालिकाका जेसिवीको चालक तुल बहादुर राना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका सुचना अधिकारी रविन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
गम्भिर घाइते इटानीको खुट्टा र दाँतमा चोट लागेको छ । उनको अहिले पोखरामा उपचार भइरहेको छ । सो पुल ढलान गरेको दुई दिनपछि पुल भत्किएको हो । वाइटी जय बुद्ध कन्ट्रक्सन प्रालीले निर्माण गर्दै गरेको ५८ मिटर लामो पुल बडिगाढ खोलामा आएको बाढीले भत्काएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘पहिलो त पुलमा टेका अपुग भएको हुनसक्छ भने दोस्रोचाहिँ बाढीले बगाएकएर पनि भत्किएको हुन सक्छ ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीका सिनियर डिविजन इन्जिनियर विनोद चौधरीले भने, ‘टेकाको डिजाइन हुँदैन अनुमानको आधारमा गर्ने हो ।’ पुलको अनुगमन र अध्ययन गर्न मंगलबार काठमाडौबाट विज्ञ समुह गुल्मी आउन लागेको चौधरीले जानकारी दिए ।
वि.स. ०७३ साल असारमा सम्झौता भएको पुल ०७५ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर काम गर्दा खोलामा बाढी आउने लगायतका कारणले निर्माण सामाग्री नै बगाउन थाले ।
अनि काठमाडौबाट समुह आई पुलको डिजाईन नै परिवर्तन गरि फेरी बनाउदा ढिलाई भएको इन्जिनियर चौधरीले जानकारी दिए । स्वीस सरकारको सहयोगमा स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमअन्तरगत कुल पाचँ करोड १७ लाखको लागतमा पुल बन्न लागेको हो । जसमध्ये दुई करोड ७३ लाखभन्दा बढी भुक्तान भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अब कसले र कहिले बनाउछ पुल ?
पुल भत्किएसँगै अब पुल कसले र कहिले बनाउने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ । पुल भत्किदा एकातर्फ विकासमा गाउँ पछाडी परेको छ भने अर्कोतर्फ पुलबाटै यात्रा गर्ने स्थानीयको सपना पनि अधुरो भएको छ । उक्त पुन निर्माण भएको खण्डमा साविकको मुसिकोट र वामी आवाज–जवतमा निकै सहज हुन्थ्यो ।
वामी र मुसिकोटबिच आवत–जावतमा सबैभन्दा छोटो मार्ग बन्ने यस पुल भत्किएसँगै स्थानीय निकै चिन्तित रहेको स्थानीय समेत रहेका पत्रकार महासंघ गुल्मीका पूर्व अध्यक्ष जनार्दन घिमिरेले बताए । पुल नहुँदा अहिले पनि नागरिकहरु इन्द्रगौडा वा राक्सेको बाटो हुँदै यात्रा गर्नुपर्छ । जसले गर्दा यातायातमा मात्रै डेढ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने घिमिरेले बताए । त्यसका साथै यातायातमा पनि अझै केहि बर्ष बढी रकम र बढी समय नै खर्चेर यात्रा गर्न बाध्य हुने उनले बताए ।
यससम्बन्धमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त पुल स्वयम् निर्माण व्यवसायीले नै बनाउनुपर्ने बताएको छ । ‘सम्पन्न भएपछि र भुक्तन दिएपछि भत्किएको भए हाम्रो गल्ति हुन्थ्यो ।’ सिनियर इन्जिनियर चौधरीले भने, ‘यसको पुन निर्माण व्यवसायीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ पुलको निर्माण अवधिभर आफ्नो कार्यालयको एकजना इन्जिनियर मुसिकोटमै बसेर अनुगमन गरेको र ढलान गर्दाको दिन थप एकजना इन्जिनियर निर्माण स्थलमा पुगेको उनले बताए । पुल पुन निर्माणको लागि भने अब केहि बर्ष लाग्ने चौधरीले बताए ।